Sida loo Guba BitComet iyo FrostWire filimada in DVD
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan iyo Guba BitComet / FrostWire Movies in DVD
Hadda BitTorrent waa file-qaybsiga caadi ah oo caan ah maamuuska ah. BitComet iyo FrostWire yihiin labo ka mid ah BitTorrent macaamiisha la heli karo si ka soo dejisan. Si loogu badalo bitcomet iyo frostwire filimada in DVD noqdo baahida caadi ah. Halkan waxaan ku talinaynaa BitComet iyo FrostWire in DVD gubi - Wondershare DVD Creator , si ay u caawiyaan aad u falay.
Barnaamijkan qoreysa xawaaraha gubashadii sare iyo tayada wax soo saarka fiican. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, si ay u DVD aad u bedeli karaan BitComet la Wondershare DVD Creator for Mac . Waxay u dhawaadeen Gaaladii shaqeeyaan isku mid. In tallaabooyinka hoos ku qoran, waxaan u qaadanayaa shaashada Windows. Kaliya u hubso in aad ka hesho version saxda ah.
Sida loo badalo BitComet iyo FrostWire in DVD talaabo talaabo ah
Tallaabada 1. dejinta filimada il aad
Guji "Import" si dar filimada BitComet aad u baahan tahay si ay u gubaan in DVD galay DVD Creator ah. Jiid iyo iyaga hoos u yahay inuu abaabulo xigxiga video ah. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, aad astaysto aad videos by beerista, falinjeeerka, qoqobada, iwm sida aad jeceshahay in aad kor videos goobtii. Hadda waxaa sidoo kale aad u dajiyaan karaa sawiro si ay u sameeyaan DVD sawir slideshow.
Tallaabada 2. Dooro DVD menu ah oo astaysto
40 Foomamka DVD menu oo lacag la'aan ah ayaa la siiyaa DVD xirfad dheeraad ah oo raadinaya. Waxa kale oo aad astaysto ka thumbnails DVD menu, sawirada asalka, badhamada, iwm sida aad jeceshahay. Haddii aadan rabin inaad hesho DVD menu ah, oo kaliya dooran "Menu No".
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo gubi BitComet / FrostWire in DVD
Guudmar natiijada tafatir ah ay dhacdo in aad u hagaajin kara si gaar ah. Ugu dambeyntii, markii oo dhan waa OK, aad riix kartaa "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya.
Iyadoo Wondershare xirfad DVD Creator , waxaad ka heli doontaa waxa quruxsan fudud si loogu badalo bitcomet iyo frostwire files si DVD si aad ku raaxaysan karaan daawashada filimaanta qoyskaaga guriga.
About BitComet iyo FrostWire
BitComet: Barnaamijka BitComet waa Peer-fadeed (P2P) barnaamij BitTorrent file-wadaagga, iyo sidoo kale multi-maamuuska tababare isku dhafnaa download multi-. Waxa ay taageertaa download isku mar. Sababo la this, waxaa qaybo ka mid ah files sawiri kartaa ilo badan oo kala duwan oo hab maamuuska P2P / Client-server, iyo buuxiso download gaar ah si hufan.
FrostWire: FrostWire waa file sharing codsi xir-fadeed ee hab maamuuska BitTorrent iyo Gnutella. FrostWire ku qoran Java. Oo waa fargeeto ah LimeWire iyo macmiilka Gnutella kale oo caan ah meeshaas oo ahayd asal ahaan u dhashay. Waa lacag la'aan ka virus iyo spyware la is-dhexgalka Lugood.
Video qaabab ay taageerayaan Wixii Blackberry Taxanaha Storm